ဆုရ Maid Agency ကစင်္ကာပူ | MYHELPER PTE LTD
သမာဓိရှိခွငျး. တရားမျှတမှု. ကရုဏာ.
အလုပ်ရှင်များကိုကာကွယ်ပေးရန်နှင့်စင်္ကာပူတွင်အိမ်ဖော်ဖို့ဂုဏ်သိက္ခာပေးသော core တန်ဖိုးများ
ကျနော်တို့အိမ်ဖော်အပေါ်လူ့အရင်းအမြစ်၏စင်္ကာပူရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရှိသမျှနှင့်အတူအပြည့်အဝလိုက်နာ (MOM) စည်းမျဉ်းများနှင့်စည်းမျဉ်း. ကျနော်တို့အပြည့်အဝပွင့်လင်းယုံကြည်.
ကျနော်တို့စင်္ကာပူမှာအလုပ်ရှင်နှင့်အိမ်ဖော်နှစ်ဦးစလုံး၏အကျိုးစီးပွားအားကာကွယ်ရန်. စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ကန်ထရိုက်စာချုပ်များမသိရသေးသို့မဟုတ်စိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးသည်အဘယ်မှာရှိ, ကျွန်တော်စင်္ကာပူမှာအလုပ်ရှင်နှင့်အိမ်ဖော်များ၏မျက်နှာသာအတွက်သူတို့ကိုအနက်ကိုဘော်ပြဖို့ရှေးခယျြ.
ငါတို့ရှိသမျှသည်အိမ်ဖော်ဆက်ဆံပါ- မြန်မာအိမ်ဖော်, ဖိလစ်ပိုင် အိမ်ဖော်, အင်ဒိုနီးရှားအိမ်ဖော်, ကမ္ဘောဒီးယားအိမ်ဖော် - ခိုင်မြဲစွာသေးရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူ. ငါတို့ရှိသမျှသည်အိမ်ဖော်တရားမျှတတဲ့ကုသမှုခံယူခြင်းနှင့်လုံခြုံအလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ပျော်မွေ့ကြောင်းသေချာစေရန်ကြိုးစားအားထုတ်ပါစေ.
MyHelper Pte Ltd ကတစ်လက်ခံရရှိသူဖြစ်ဂုဏ်ယူဖြစ်ပါသည် "အမှတ်တံဆိပ်ကောင်းမွန်သောအတွက်" ဆုချီးမြှင့် 2018 (မျှတသောအလုပ်အကိုင်အလေ့အကျင့်အမျိုးအစား).
"ကောငျးဘို့အမှတ်တံဆိပ်" stakehoders ၏ကွဲပြားခြားနားသောအုပ်စုများအကြိုးရှိကြောင်းရည်ရွယ်ချက်-မောင်းနှင်တန်ဖိုးများကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့် actualised ကြောင့်ရှေ့ဆက်-ရှာဖွေနေဒေသဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ်အားဂုဏ်ပြုတစ်အသိအမှတ်ပြုမှုအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
"ကောငျးဘို့အမှတ်တံဆိပ်" MayBank နှင့်အတူ ပူးပေါင်း. CEO ဖြစ်သူအာရှကစီစဉ်နေသည်, ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်း BBX နှင့် B Lab က, သော "ကောငျးဘို့အမှတ်တံဆိပ်" အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရဖို့အမည်စာရင်းတင်သွင်းတင်သွင်းခဲ့တဲ့၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်လူမှုရေးတာဝန်ယူမှုကတိကဝတ်အပေါ်တစ်ဦး Self-အကဲဖြတ်ကိရိယာတန်ဆာပလာများနှင့်ကုမ္ပဏီများမှထောက်ပံ့.
ငါအရေးတကြီးပြည်တွင်းအကူအညီလိုအပ်နေ MyHelper ဆီသို့ရောက် လာ. ,. သူတို့ကငါ့ကိုအကောင်းဆုံးအကြှနျုပျ၏အခွအေနေကိုင်တွယ်ရန်အများအပြား options နဲ့အကြံဉာဏ်ကိုပေးခဲ့တယ်. ငါသည်ငါ့လိုအပ်ချက်နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်၎င်းတို့၏ကျွမ်းကျင်ပိုင်များကလေးစားမိတယ်. အဆိုပါတပ်မက်လိုချင်သောအအထောက်အငါ၏အခွအေနကေိုဖြေလျှော့ဖို့အချိန် လာ..
ရာခေလသည်ကာရှင်း	- နော် Connie ၏အလုပ်ရှင်
MyHelper ကျွမ်းကျင်ပိုင်၏အမှတ်အသားအထက်လမ်းခဲ့. ငါသည်ငါ၏အမှုမှမတက်ရောက်မစ္စတာဂျိမ်းစ်၏ခှငျ့ရခဲ့. ငါသည်ငါ့သမီး၏အထူးဆေးဝါးကုသမှုခွအေနအေထိုသခင်နှင့်အတူမျှဝေလိုက်တဲ့အခါ, သူကမှတဆင့်နောက်တော်သို့လိုက်နှင့်အထောက်အကအကြောင်းရှင်းလင်းခဲ့ရရှိနိုင်မည်. ကျနော်တို့အနည်းဆုံးဆက်ကြောင်းနှင့်အတူအထောက်အနှင့်အတူအလျင်အမြန်ဆင်းအခြေချနိုင်ခဲ့ကြတယ်. ထို ... ရှိသည်9လနှင့်ငါ့သမီးအတွက်အထောက်အမချစ်သောသူများနှင့်သူတို့ကထာဝစဉ်အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းများအဖြစ်သူတို့ကိုယ်သူတို့အသိအမှတျပွုပါပွီ.
Wendy Seoh	- နော်စေးရာလေး Mue ၏အလုပ်ရှင်
Angeline Ng သည်
ကျနော်တို့ကိုငါ့အသက်မိခင်ပြီးနောက်ကြည့်ဖို့အရေးတကြီးတစ်အိမ်ဖေါ်လိုအပ်. MyHelper မှကျေးဇူးတင်ပါသည်, ငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ဦးလေပြေခဲ့သည်. တစ်ဦးပထမဦးဆုံးအချိန်အလုပ်ရှင်အဖြစ်, အေဂျင်စီကိုလည်းအပေါငျးတို့သအသုံးဝင်သောအချက်အလက်များကိုပေးအပ်ခြင်းအတွက်ကူညီ. နော် Dorathy နှစ်နှစ်ကိုအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်နှင့်ကျွန်တော့်ကိုသူမရဲ့စာချုပ်သက်တမ်းတိုးကြပါပြီ. သူမသည်အလွန်မိသားစု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေသည်.
Angeline Ng သည်	- နော် Dorathy ၏အလုပ်ရှင်
ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အလုပ်ရှင်များအဖြစ်, ကျွန်ုပ်တို့၏သားပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ရှုကူညီတခု FDW ငှားရမ်းစိုးရိမ်ခဲ့ကြသည်. သို့သျောလညျး, ကျနော်တို့ MyHelper ရဲ့ဝန်ထမ်းများအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူသှားရာလမျးတစျခုစီနှင့်တိုင်းခြေလှမ်းခဲ့ကြပြီကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်, တောင်အေးဂျင့်များ၏မျှော်လင့်ထားသည့်အရာကိုကျော်လွန်သွား.
ဂျေမီ Shen	- နော် Ra ခေး, La ၏အလုပ်ရှင်
ခရစ် Loh သည်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်ကြီးရွယ်အိုများ mom, ကြည့်ရှုရန်အထောက်အရှာဖွေနေခဲ့ကြသည်. MyHelper ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်ဘယ်သူကိုကိုက်ညီကူမသောသူများစာရင်းကိုပေးအပ်. အဆိုပါစာရွက်စာတမ်းတစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်းနှင့်မျှမရိုးရှင်းသောဖြစ်စဉ်ကို & အရေးအကြီးဆုံးကတော့အဘယ်သူမျှမ '' ကိုဝှကျထားကုန်ကျစရိတ် '' ခဲ့. MyHelper ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုအဲဒီမှာအဆုံးသတ်မပြုခဲ့. အခါတိုင်း, မည်သည့်မေးမြန်းချက်ရှိပါတယ်, မစ္စတာဂျိမ်းစ်ကျွန်တော်တို့ကိုချက်ချင်းအဖြေပေးလိမ့်မယ်. ဒီတော့ဝေးကြူထက်ပိုပြီးအဘို့အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူခဲ့6လနှင့်ကျွန်တော်သူမကိုဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူပျော်ရွှင်နေကြသည်. MyHelper - သင်ကအထောက်အလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အကြံပြု.
ခရစ် Loh သည်	- ကြူကြူစန်း၏အလုပ်ရှင်
ကျနော်တို့ MyHelper ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တွင်းအထောက်အများအတွက်အင်္ဂလိပ်သင်တန်းများဖွဲ့စည်းကြောင်းနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်. အဆိုပါနောက်ဆက်တွဲဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကိုလည်းသူမ၏သူမကဂရုစိုက်ကြောင်းနားလည်ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်များနှင့်မဖြေရှင်း၏စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှတယောက်တည်းကျန်ရစ်သော. အဆိုပါ outings လူမှုရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကျနော်တို့မှာအများကြီးအကျိုးစီးပွားအကူအညီနဲ့အမျိုးမျိုးသောနေရာများနှင့်အရှင်ကျန်းမာမြှင့်တင်. ကျေးဇူးတင်ပါသည် MyHelper!
Brandon Tan က	- ထူးအိမ်သင် Gyan မိုး၏အလုပ်ရှင်
ကျနော်တို့ MyHelper သူမစင်္ကာပူမှာရောက်ရှိလာခဲ့ယခုအချိန်တွင်မှကြှနျုပျတို့၏အထောက်အမများအတွက်တန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်ဂရုစိုက်ခံစားရနိုင်ပါတယ်တဲ့အသိုင်းအဝုိင်းကိုဖန်တီးရန်ရှာကြံသည်ဟုနားလည်သဘောပေါက်.
မစ္စတာ R ကို RAVICHANDRAN - ဂျန်မာရင်းကျိုကော်မိုင်၏အလုပ်ရှင်
MyHelper တို့သည်ကြီးစွာသောအကူအညီဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အမှန်တကယ်သမာဓိသူတို့ရဲ့ Core တန်ဖိုးများကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီး, တရားမျှတမှုနှင့်သနားကြင်နာခြင်း. သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အညီဖွဲ့စည်း outings အပေါ်ထားရှိခြင်း, သူတို့ရဲ့အိမ်ဖော်များအတွက်အကြံပေးခြင်းများနှင့်နားထောင်ခြင်းနားကို. တစ်မစ်ရှင်နှင့်အတူအမှန်ဆိုသည်ကားတစ်ဦးအေဂျင်စီ.
မစ္စတာ R ကို RAVICHANDRAN
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အင်ဒိုနီးရှားအိမ်ဖော်ကိုသိရ, filipina အိမ်ဖော်နှင့်ကမ္ဘောဒီးယားအိမ်ဖော်အညီအမျှကောင်းစွာ.
6-မြန်မာနိုင်ငံအိမ်ဖော်သေချာစေရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံပေးခွငျးအားဖွငျ့လလမ်းညွှန်, အင်ဒိုနီးရှားအိမ်ဖော်, filipina အိမ်ဖော်နှင့်ကမ္ဘောဒီးယားအိမ်ဖော်ကောင်းကောင်းသင့်အိမ်အတွက်ချိန်ညှိနေကြတယ်.
အသစ်သောအိမ်ဖော်သို့မဟုတ်လွှဲပြောင်းအိမ်ဖော်ငှားရမ်းအပေါ် MOM စည်းမျဉ်းများနှင့်အတူလိုက်နာမှုအတွက်အပြည့်အဝစာရွက်စာတမ်းများ. အလုပ်သမိုင်း၏အပြည့်အဝထုတ်ဖော်.
အိမ်ဖော် '' အသက်အရွယ်နှင့်ပညာရေး၏အဘယ်သူမျှမမမှန်မကန်ပြုလုပ်မှု.
ကျနော်တို့ဆိုအိမ်ဖော်သညျးမခံပါဘူး - အသစ်သောအိမ်ဖော်သို့မဟုတ်လွှဲပြောင်းအိမ်ဖော် - သဘောထားကပြဿနာများနှင့်အတူ. သူတို့ကအိမ်မှာလှေတျတျောမူပါလိမ့်မည်. ကျနော်တို့လွှဲပြောင်းအိမ်ဖော်ပြန်သုံးကြဘူး.
ခေါ်ရန်. ရှာဖှေ. တောင်းဆိုချက်ကို.
ကိုယ်ကသာကြာ 15 ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ရှာနှငျ့သငျဖို့သက်ဆိုင်ရာထောက်ခံချက်များစေဘို့မိနစ်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြခန်းရှာရန်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုပြောပြ. ကျွန်ုပ်တို့၏ဖော်ရွေန်ထမ်းများထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်သင့်အားသင့်လျော်သောအိမ်ဖော်ပေးပို့ပါလိမ့်မယ်. ကျနော်တို့ကောင်းစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိန်းကလေးငယ်များကိုသိရ.
ခေါ်ဆို 6100 2400
အသိအမှတ်ပြု | အသိအမှတ်ပြုမှု | ဆက်နွယ်မှု
MOM အားဖြင့်မြင့်မားသောဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုခဲ့သည် Rating
သောကြာနေ့မှတနင်္လာနေ့: ညနေ6မှ 10am
စနေနေ့: ညနေ6မှနေ့လည် 1